नेपालमा एक वर्षमा ५ करोड कण्डम बिक्री, कार्तिक र मंसिरमा बढी खपत ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालमा एक वर्षमा ५ करोड कण्डम बिक्री, कार्तिक र मंसिरमा बढी खपत !
२०७५, ४ मंसिर मंगलवार
काठमाडौं, मंसिर ४ । नेपालमा कण्डम भन्ने वित्तिकै अहिले पनि धेरै सर्वसाधरणका लागि लाजको कुरा हुन्छ । तर, विस्तारै नेपालीहरु पनि कण्डमलाई सामान्य तरिकाले बुझ्न थालेका छन् । र, प्रयोग गर्ने पनि बढेका छन् ।
सुरक्षित यौन सम्पर्कका लागि निकै भरपर्दो मानिने कण्डमबारे जनचेतना वृद्धिसँगै यसको प्रयोगकर्ता पनि बढिरहेका हुन् । तथ्यांकका हिसावले नेपालमा हरेक वर्ष कतिले कण्डम प्रयोग गर्छन् ? कुन महिनामा कण्डम बढी बिक्री हुन्छन् ? लगायत प्रश्नबारे आज हामीले यहाँलाई जवाफ दिने कोशिस गरेका छौं ।
याे पनि पढ्नुस के हो फिमेल कण्डम, कसरी प्रयोग गरिन्छ (भिडियोसहित)
–नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ करोड थान कण्डम खपत हुने गरेको छ । त्यो नेपालको आवश्यकताको ५० प्रतिशत मात्र भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा हरेक वर्ष सरकारले २ करोड ५० लाख कण्डम निःशुल्क वितरण गर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुपातमा बिक्री गर्ने बताइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस युवाले किन कन्डम प्रयोग गर्न मान्दैनन् ? रहस्य यस्तो रहेछ
–नेपालमा ४० प्रतिशत युवा विवाह अघि नै यौनसम्पर्कमा संलग्न हुन्छन् । तीमध्ये ४० प्रतिशतले मात्र कण्डम प्रयोग गर्ने नेपाल परिवार नियोजन संघको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
–नेपाल सरकारको एक अध्ययनअनुसार कात्तिक र मंसिर महिनामा नेपालमा कण्डमको खपत बढी हुने गरेको छ । अन्य महिनामा सरदर २५ लाख कण्डम खपत हुन्छ भने ती दुई महिनामा झन्डै ३२ लाख कण्डम खपत हुने राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुले जनाएको छ । ती दुई महिना रोजगारीका लागि स्वदेशभित्रै अन्य सहरमा वा विदेश गएकाहरू घर फर्कने हुँदा कण्डमको माग बढ्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस कतै कण्डम किन्दा यस्तो गल्ती त गर्नुहुन्न ?
–नेपालमा निःशुल्कदेखि ८ सय रुपैयाँसम्मका कण्डम पाइन्छन् । सिलिकनले बनेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका ८ सय रुपैयाँसम्मका कन्डम नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ।
काठमाडौं २ हप्ताका लागि सटडाउन
श्रीलङ्काकाे निर्वाचनमा राजपक्ष दाजुभाइको दललाई अत्याधिक बहुमत
‘कक्षा ११ को परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू संचालन नगर्नू’
चुच्चेपाटी घटना: एसिड होइन तारपिन हानिएको हाे
उपत्यकामा ह्वात्तै बढ्याे कोरोना, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो चेतावनी
वीरगंजमा कोरोनाको नयाँ रेकर्ड, एकैदिन १४१ जनामा संक्रमण
फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य
कस्तो छ आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान ?
Biden calls Trump's 'hurt God' attack 'shameful'
(CNN) Presumptive Democratic presidential nominee Joe Biden on Thursday countered President Donald Trump's baseless attack that he,apracticing Roman Catholic, would somehow "hurt God," calling the comments "shameful." "Like so many people, my ...
More than 20GB of Intel source code and proprietary data dumped online
Intel is investigating the purported leak of more than 20 gigabytes of its proprietary data and source code thatasecurity researcher said came fromadata breach earlier this year. The data—which at the time this post went live was publicly available on ...
Ivica Zubac isacan't-miss kid in Clippers' win over Dallas
Clippers center Ivica Zubac slipped toward the rim Thursday night and, catchingapass, dunked with both hands asachorus of yells erupted from his team's bench in the opposite corner inside HP Field House. Dallas immediately calledatimeout, its deficit ...
MUST WATCH. Security analyst explains2major concerns with TikTok 03:42. (CNN) President Donald Trump on Thursday issued an executive order that would ban the social media app TikTok from operating in the US in 45 days if it is not sold by its Chinese ...
COVID-19 data shows encouraging shift for Sedgwick County, walk-in testing opportunities coming up
WICHITA, Kan. (KWCH) -While lead health experts in Sedgwick County aren't yet able to confirm the overall effectiveness of recent orders pertaining to gathering limits andacounty mask order, data on Sedgwick County's COVID-19 dashboard shows an ...